Kooxda Juventus oo maanta soo gabagabaynaysa karaantiilkii ay ku jireen xiddigaheeda iyo shaqaalaheeda – Gool FM
Kooxda Juventus oo maanta soo gabagabaynaysa karaantiilkii ay ku jireen xiddigaheeda iyo shaqaalaheeda
(Turin) 25 Mar 2020. Ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxda Juventus ayaa la rajeynayaa in maanta ay ka soo baxaan karaantiilkii ay ku jireen, balse ay guryahooda ku xaroon doonaan si ay u keli-noollaadaan.
Bianconeri ayaa gashay xaalad deg deg ah kaddib markii Daniele Rugani laga helay coronavirus, ciyaartoyda qaar ayaana ku sugnaa qolalkooda hoteelka Juve muddo labo toddobaad ah.
Tiro 121 xubnood ah oo isugu jira ciyaartoy iyo shaqaalaha kooxda ay lagu xannibay goobo gaar ah tan iyo guushii Marwada Duqda ay ka gaartay Inter Milan, hase ahaatee labadii toddobaad ee loo qabtay ayaa hadda idlaatay.
Waxaa lagu soo warramayaa in dhammaan safka kooxda Juventus laga baaray caabuqa coronavirus, waxaase keliya laga helay saddex ciyaaryahan oo kala ah Paulo Dybala, Blaise Matuidi iyo Rugani.
Matuidi oo xanuunkan laga helay 17-kii bishan Maarso ayaa karaantiilka ka soo bixi doona 31-ka bishan, halka Dybala oo isna xanuunkan lagu ogaaday 21-kii Maarso isna karaantiilka ka bixi doona 4-ta April.
Waxaa guud ahaan xiran xarunta tababarka kooxda ee Coninassa training centre taasoo la micno ah in ciyaartoyda ay ku tababaran doonaan guryahooda.
Douglas Costa, Sami Khedira, Gonzalo Higuain iyo Miralem Pjanic ayaa dhammaantood laga waayay xanuunkan, waxaana ay u safreen qoysaskooda si ku meel gaar ah.
Kooxda Inter Milan oo fasaxday xiddigaheeda Ajaaniibta ah ee aan Taliyaaniga ahayn & Juventus oo maanta...